Burmese People: January 2008
အမေ့ အတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရ
လော က ကြီး မှာဒေါင် ကျ ကျ ပြား ကျကျ ကျ ချင် သ လို ကျ ပါ စေ..ကြုံ ရာမှာ စား ..ရောက် ရာ နေ ရာ မှာနေ ..တွေ့ရာ မှာ အိပ် နေ ရ ပြီ….. ကျနော့ ဘ၀ ရဲ့ သက် ရှိ ဘုရား ဖြစ် တဲ့ အမေ ကတော့ ..ကျနော့ ကို သူ စိတ် ထဲ မှာ တွေး နေ လိမ့် မယ် … အမေ့ရဲ့ အား ကိုးစ ရာ … သား ကြီး ကျနော့ကို အသက် က သုံး ဆယ် ရောက် ပြီ.. မိသား စုအတွက် လဲ ပြန် မ ကြည့်…ပေါ့ ပေါ့ နေ ပေါ့ ပေါ့ စား…. အား ကိုး မရ နိုင် ဘူး.. လို့..အမေ့ဘ၀ အို မင်း လာ ချိန် မှာ … ကျနော် ပြုစုပေး ချင် ပါ တယ် … အမေ မသေ ခင် … အမေ့ သား.. ကျနော့ .. ရဲ့ သာယာ လှ ပ တဲ့ မိ သား စုလေး တခု ကို မြင် သွားစေ ချင် တယ် .. အမေ့ ရဲ့ မြေး မြစ်တွေ နဲ့ ပျော်နေစေချင် တယ်…
ဒါတွေဟာ ကျနော့စိတ်ကူးတွေပါအမေ…လက်တွေ့မှာ တော့… ကျနော်..လူတိုင်း အတွက် ကြီးလေး တဲ့ တာဝန် တခု ကို ကျနော် တယောက် ထဲ ကြိတ် ကြံနေ ပါတယ်…. အမေ့ သား က ရည် ရွယ် ချက် ကြီး တယ်… လုပ်တော့မယ် လို့ဆုံး ဖြတ်ထား ပြီ ဆို ရင် လည်း … တွေ့ကြုံလာ မယ့် . . ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေ ကို ကျနော် မကြောက် တော့ဘူး…. နောက် ပြီး ကျနော့လုပ် ရပ် တွေ က အန္ဒရယ် များ လို့.. ကျနော် နဲ့ ပါတ် သက် ပြီး … အမေ့ကို မထိခိုက် စေ ချင် ဘူး……ကျနော့ ရန်သူ လို့သတ်မှတ်ထား သူ တွေ က ခွေးထက် မိုက် ရိုင်းတယ် … ငရဲ ကို လည်း မကြောက် ဘူး… ဒီလို လူတွေ နဲ့ ယှဉ် ပြိုင် ပြီ ဆိုရင် ကျနော် နဲ့ ပါတ် သတ် ပြီး ..အမေ့ကို ရန် ပြုလိမ့်မယ် …. ဒါတွေ ကိုကြိုတင် တွေး မိ လို့ကျနော် အမေ နဲ့ ဝေးဝေး နေ တာ ပါ….
ကျနော့်ကို ခွင့်လွတ် ပါ အမေ… အဝေး ကနေ ပဲ သား ကန်တော့လျှက်ပါ……မွေးနေ့မှာ အမေ့ကို တောင် ဦး မချ နိုင် ခဲ့ တဲ့ ကျနော် ဒီ စာ ကို ရေးနေ ရင်းနဲ့ မျက် ရည် ၀ဲ မိတယ် အမေ…. အရင်က သားကြီး ဘ၀ မှာ အမေ က ပထမ ပါ … အခုတော့အမေ က ဒုတိယ ဖြစ် ခဲ့… ပြီ.. အမေ…….
အမေ့ကျေး ဇူး တွေ ကို သိရက် နဲ့ မဆပ် ဖြစ်ခဲ့ တဲ့်….မိသားစုတာဝန်မကျေ ပွန် ခဲ့ တဲ့ ..... တဇွတ်တိုး သမား သား မိုက် ကြီးကို ခွင့်လွတ် ပါတော့…အမေ…
အမေ့အတွတ် အမှတ် တရ
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 20:46 1 comments
အဝေးရောက် ဒေါင်းမင်းများသို့ ……………
-ရန်သူ့ ပြည်တွင်း တော်လှန်ရေးဒေါင်းမင်းတွေ
ညီသစ်ဒေါင်းတို့ငြိမ် ရမည်လား……….။
လမ်းပြ မည့် သူလို
ညီတို့ သည်လဲသေရဲ ပြီ………………….။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:300comments
အန်တီ့ ပုံတွေထဲ က အကြိုက်ဆုံး..
ညီအကို ၊ သွေးရင်း များပမာ...........
ရင် ထဲ ရှိသမျှ.........
ရင် ဖွင့်ချင် ရင်...
ရင်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်..yangonpeoples@gmail.com ကို ပို့ထားပေးပါ
ရန်ကုန်သားတို့ အကြိုက် ဘလော့ များ...
နယ်ခြားမဲ့ဘလော့ဂါ များ
jမန်မာ့ သမိုင်း မှ အာဇာနည် များ (2)
ကိုယ်တွေ့ ကြုံ.... (2)
ဒီလို ဒီလို (4)
မန်မာ့ သမိုင်း မှ အာဇာနည် များ (1)
မဲ ရုံမှတ်တမ်းများ (1)
ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ ချက် များ (1)
ပြည်ထောင်စုနေ့အခန်းအနား (1)
မြန်မာ့ သမိုင်း မှ အာဇာနည် များ (3)
လေးစားအပ်သူ များ........ (3)